FANISAM-BAHOAKA: Mijanona ho tsiambaratelo ny valim-panontaniana | déliremadagascar
FANISAM-BAHOAKA: Mijanona ho tsiambaratelo ny valim-panontaniana
13 andro no ilaina hamitàna ny fanisana ankapoben’ny mponina sy ny trano fonenana, andiany fahatelo (RGPH3), araka ny fanazavan’ny « chef de l’unité de travaux de terrains » an’ny INSTAT, Philémon Razafimamonjy. Tsy ho tratra noho izany ny fe-potoana hamitàna ny fanisàna amin’ny 10 jona 2018. Ny fahataràn’ny karaman’ireo “agents recenseurs” (AR) sasantsasany no anisany antony hampihemotra io daty voatondro io. Nisy tamin’ireo “agents recenseurs” no tsy nanomboka ny asany raha tsy azon’izy ireo ny karamany, hoy ny mpandrindra nasionalin’ny fanisana, Tovonirina Thédore Razafimiarintsoa, nandritra ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety ny 06 jona 2018. Nambaran’ity tomponandraikitra ity fa nampandraiketina ny fandefasana ny karaman’ireo AR ny tambazotra serasera Telma. Nalefa tamin’ny alalan’ny Mvola noho izany ny karama ka nisy ny tsy fetezana.
Ankoatra izany nampanahy ny mponina ny fanontaniana ataon’ny AR. Nohamafisin’ny mpandrindra nasionalin’ny fanisana fa ao anatin’izany fanontaniana izany ny fanisana ny “biens possédés par le ménage” na ireo fananan’ny tokantrano iray toy ny radio, televiziona, ny finday… Ahafahana mamantatra ny fari-piainan’ny Malagasy izany. Mijanona ho tsiambaratelo tanteraka anefa ny fahafantarana izany fa isa amin’ny ankapobeny no havoaka any amin’ny farany. Tsy vitan’ny fanisàna ny olona ihany no atao amin’ny RGPH3 fa jerena ihany koa ny fahasalamany, ny lafiny asa, ny fahaizana mamaky teny sy manoratra… Masontsivana ilaina amin’ny fananganana tetikasa ny fananana antontan’isa.